Iindawo ezigqibeleleyo zokunikela ngeencwadi ezisetyenzisiweyo zazo zonke iintlobo - Uncedo Donations
Iindawo ezigqibeleleyo zokunikela ngeencwadi ezisetyenzisiweyo zazo zonke iintlobo
Ukuba unezishelufu ezizaliswe ziincwadi osele uzifundile kwaye akunakulindeleka ukuba uzisebenzise kwixesha elizayo, akukho sizathu sokubavumela ukuba bahlale apho baqokelele uthuli. Nje ukuba ugqibile ngencwadi, inokusetyenziswa kakuhle ngumbutho ongenzi nzuzo. Ezinye izibonelelo zithengisa iincwadi ezinikelweyo ukwenza imali, ngelixa ezinye zizisebenzisa kwiiprojekthi okanye ukwabelana nabantu abasweleyo. Nokuba uhlala phi, maninzi amathuba okuba imibutho yasekuhlaleni inokukuvuyela ukusebenzisa iincwadi zakho ezisetyenziswe ngobunono!
indlela yokufumana amabala ebhotela
Uninzi lwezikolo zikarhulumente nezabucala ziya konwaba ukwamkela iminikelo yeencwadi ezifanelekileyo iminyaka kunye nenqanaba lokufunda labafundi bazo. Banokusebenzisa iincwadi ezisetyenzisiweyo ezinokusetyenziselwa ukugcina isitokhweilayibrari yesikolo, ukubonelela ngezinto zokufunda ezongezelelweyo zootitshala kunye nokusetyenziswa kwabafundi, okanye ukubanika ukuba bathengise njengeprojekthi yokunyusa ingxowa. Abanye banokude banike abantwana iincwadi abanokuthi bazigcine, ukuze babe nezinto zokufunda ezifumanekayo ekhaya.
Isisombululo seNkxaso mali
Indlu kaRonald McDonald
URonald McDonald House ngumbutho wesisa obonelela ngendawo yokuhlala kwiintsapho xa zihlangabezana namava okufumana umntwana esibhedlele kude namakhaya. Babonelela ngendawo yokudlala yabantwana abahlala ekhaya nabazali babo, ke iminikelo yeencwadi, izinto zokudlala kunye nezinye izinto ezinokunceda ukugcina izinto ziqhelekile kubantakwabo babantwana abagula kakhulu.
Izibhedlele ezijolise kukhathalelo lwabantwana zinokonwaba kakhulu ukufumana iminikelo yeencwadi zabantwana izigulana zabo ezincinci ezinokuzifunda kwaye zikonwabele. Iincwadi ezinikezelweyo kunye nezinto zokudlala zinokubonelela ngeeyure zokuphelisa uxinzelelo kubantwana ekufuneka babhedlele. Ezi ncwadi zinokufumaneka kwizigulana ezisencinci, zinikezelwe kumavolontiya afundela abaguli, okanye zibekwe kumagumbi okulinda amalungu osapho.
IiBhanki zeNcwadi yaBantwana
Inani loluntu lineenkqubo zeBhanki yeNcwadi eziqhutywa yimibutho yesisa yasekuhlaleni. Imizekelo embalwa ibandakanya Ibhanki yeeNcwadi zaBantwana eOregon kunye Ibhanki yeNcwadi yaseMaryland . Ezi nkqubo ziqokelela iincwadi zabantwana ezinikelwe kwaye zizenze zifumaneke kubantwana abakwiindawo ezinengeniso ephantsi. Iinkqubo ezithile ziyahluka ngokwamaqela, kodwa eyona nto kugxilwe kuyo kubandakanya ukunika abantwana iincwadi ukuze bagcine abo banokungakwazi ukufikelela kwiincwadi ekhaya. Injongo kukunceda ukukhulisa amanani abafundi afundileyo ngokuqinisekisa ukuba kukho iincwadi emakhayeni abo bonke abantwana, ukuze bazifundele kwaye ukuze abantu abadala (okanye abantwana abadala) bakwazi ukubafundela.
Iindawo Zokuhlala Zabasetyhini
Iindawo zokufihla amakhosikazi zihlala zithatha abasetyhini kunye nabantwana abalekayo kwiindawo zokuhlala apho ubomi babo busemngciphekweni ngenxaudlama lasekhaya. Abahlali babo bahlala bemka ekhaya bengenanto ngaphandle kweempahla abazinxibileyo. Ngenxa yoko, le mibutho yamkela iintlobo ezininzi zezinto ezinikelweyo, kubandakanya izinto eziyimfuneko kunye nezinto zokunceda abantwana bonwabe, ezinje ngeencwadi. Ukuba kukho indawo yokuhlala yommandla wakho, tsalela umnxeba ubuze ukuba bangathanda na ukufumana iincwadi zabantwana onokuthi unikele ngazo.
IcawaAmaqela olutsha kunye neeklabhu zenkonzo yolutsha zihlala zibamba ukuthengisa ngerummage njengendlela yokuqokelela imali yokuxhasa uhambo kunye nezinye iintlobo zemisebenzi. Kuba iincwadi zizinto ezithandwayo, naliphi na iqela elilungiselela ukuthengisa imali eyadini liya kuyivuyela kakhulu ukufumana iincwadi ezinikezelweyo ukuba zithengiswe. Abanye banokusebenzisa iincwadi ezisekelwe elukholweni okanye ezokuzinceda xa beshumayela, bezisasaza kubantu abanokuthi baxhamle kuzo.
Ukuba ujonge ukunikela ngeencwadi zabantu abadala, cinga ngokwenza umnikelo Ukusebenza kwePhepha . Oku kungenzi nzuzo kuqokelela iincwadi zamajoni kunye neentsapho zawo. Basasaza iincwadi abaziqokelelayo kumajoni ase-U.S athunyelwe okanye amiswe phesheya, kunye nase-U.S.Iintsapho zomkhosikwayeamagqala. Ngamaxesha athile babamba iiprojekthi ezizodwa ezixhasa ukuhanjiswa kweencwadi kumalungu enkonzo kunye namagqala ngeendlela ezahlukeneyo, ezinje ngezibhedlele zamagqala, iinkqubo zomkhosi owonzakeleyo kunye neenqwelo moya.
Iinkqubo zokuFunda nokuBhala zaBadala
Imibutho eqhuba iinkqubo zokufunda nokubhala inokuba ziindawo ezilungileyo zokuqwalaselwa kwiminikelo yencwadi. Ezi nkqubo, ezinje nge Umthi wokuFunda eSan Francisco, gxila ekuncedeni abantu abadala abangakhange bafunde ukufunda xa babesebancinci ukuba bafunde ubuchule. Banokusebenzisa iincwadi ezinikelweyo kwiinkqubo zabo ngeendlela ezahlukeneyo, ukusuka ekuzibandakanyeni kwizifundo ukubonelela abathathi-nxaxheba kwinkqubo ukuba bazisebenzise ukuziqhelanisa nezakhono abazifundayo.
Iivenkile zokuThintela zokuHamba
Imibutho emininzi engenzi nzuzo isebenzisa iivenkile ezithengisa imali njengendlela yokuxhasa ngemali imisebenzi yazo, kwaye uninzi lubandakanya iincwadi kwizinto abazithengisayo. Nxibelelana noMoya wakho waseKhaya, uSindiso loMkhosi, okanyeIIAMVETSIIvenkile yezolimo, okanye enyeIvenkile yezolimo, ukufumanisa ukuba baphethe iincwadi. Ukuba kunjalo, umnikelo wakho ngokuqinisekileyo uya kuthakazelelwa. Kuba izinto ezingenzi nzuzo ezisebenza kwiivenkile ezithengisayo zithengisa izinto ezinikelweyo njengendlela yokufumana imali, baya kwamkela iintlobo ezininzi zeencwadi (fiction, nonfiction, textbooks, cookbooks, iimagazini, njalo njalo) zabafundi bayo yonke iminyaka. Ezinye iivenkile ezithengisa izinto ezinkulu zinikezela ngeenkonzo zokupakisha, ngelixa abanye belindele ukuba abanikeli bazise izinto kwiivenkile zabo okanye kwimigqomo yeminikelo.
Amathala eencwadi oluntu
Ngelixa kungavakala kuyinto engaqhelekanga ukucinga ngokunika iincwadi kwithala leencwadi, kuba iilayibrari zizele ziincwadi, oku kunokuba yinto elungileyo yokwenza umnikelo. Uninzi lwamathala eencwadi oluntu anyusa imali ukuxhasa iiprojekthi kunye neenkqubo zawo ngokusingathwa kweencwadi ezithengiswayo kube kanye okanye kabini ngonyaka. Abanye bade bagcine indawo yokuthengisa iincwadi kwintengiso unyaka wonke kufutshane nendawo yokuphuma. Ezi ntengiso zihlala zibonisa indibaniselwano yeencwadi ezindala zethala leencwadi (ukulahla) kunye neencwadi ezinikelwe ngamalungu oluntu ngokubanzi.
Iincwadi zeHlabathi ezingcono
Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba iincwadi zakho zisetyenziswa kakuhle kodwa awufuni ukukhetha isisa esithile, Iincwadi zeHlabathi ezingcono kunokuba yinto elungileyo ukuba uyithathele ingqalelo. Lo mbutho wamkela zonke iintlobo zeencwadi ezinikelweyo, abazithengisa kwi-Intanethi njengendlela yokufumana imali kwimibutho eyahlukeneyo yamaqabane engenzi nzuzo exhasa ulwazi lokufunda nokubhala. Naziphi na iincwadi ezinikiweyo abazifumanayo ezingenakuthengiswa zinikwa elinye lamaqabane esisa okanye ziphinde zisetyenziswe. Banemigqomo yeminikelo kwezinye iindawo ( faka ikhowudi yakho ye-zip ukufumanisa ukuba ngaba ikho kufutshane nawe). Bakwamkela ukuthunyelwa kweencwadi ezinikelweyo.
Ukufumana iindawo zokunikela ngeencwadi
Ngelixa yonke imibutho engenzi nzuzo yamkela iincwadi ezinikelweyo, uqinisekile ukuba uya kuba nakho ukufumana iiarhente ezininzi okanyeiivenkile ezithengisa izinto zasekuhlalenikwindawo yakho eya kuvuyela ukufumana izinto ofuna ukwabelana ngazo. Nxibelelana ne- Indawo yase-United Way Ukuchonga amaqela asekuhlaleni amkela ezi ntlobo zeminikelo. Njengazo naziphi na izinto ongathanda ukunikela ngazo, kungcono ukuba unxibelelane nabameli bemibutho ocinga ngayo kwaye ubuze malunga neemfuno zabo. Bazise ukuba zeziphi iintlobo zeencwadi onazo ezikhoyo kwaye ubuze ukuba ezo zipho zamkelwe na. Ukuba impendulo nguhayi, cela iingcebiso ngeminye imibutho enokuba nesidingo sezinto ezo.
Nikela ngeencwadi ukwenza umahluko
Iminikelo yeencwadiinokunceda ukungenzi nzuzo ukunciphisa iindleko zokusebenza kunye nokubonelela ngeenkonzo ezinceda uluntu. Ukuba nesisa kwakho kunokuba nefuthe elihle kumbutho ofumana umnikelo kunye nabantu abasebenzelayo.
Uninzi lwezinto ezingenzi nzuzo zibonelela ngeenkonzo ezifuna iintlobo ezahlukeneyo zeencwadi. Ngaphandle kweminikelo, imali kuya kufuneka yabelwe ukuthenga izixhobo zokufunda. Xa abantu benikela ngeencwadi esele zisetyenzisiwe, imibutho inokusebenzisa imali ekhoyo kwezinye iinjongo.
Iminikelo yencwadi inokunceda imibutho yesisa kunye nezinye iintlobo zokungenzi nzuzo ukunyusa imali. Nokuba imibutho engenazo iivenkile ezithengisa imali inokunyusa imali ngokuthengisa iincwadi kwintengiso ye-rummage okanye ngeefandesi zokunyusa ingxowa kwi-Intanethi.
Iincwadi zokunikela nazo zinokuba nefuthe elihle kwindalo esingqongileyo, njengoko iincwadi ezingasafunekiyo ngumnini wokuqala ziya kuphelela ekubeniiphinda isetyenziswengabanye kunokuba ulahlwe.
Gcina Ingxelo Yomnikelo Wakho
Ukwenza olu hlobo lomnikelo yindlela entle yokubonelela ngenkxaso kwisizathu okholelwa kuso ngaphandle kokufumana indleko ezingaphandle kwepokotho ngqo. Kuba sele uzithengile iincwadi, isipho asizukubiza nantoni na. Qiniseka ukuba ugcina iirekhodi ezifanelekileyo zomnikelo ukuba unethemba lokuba uza kukwazi ukusibhala isipho sakho kwiirhafu zakho. Yenza uluhlu lweencwadi onikele ngazo kwaye uceleIrisithi yomnikelo wesisaxa usisa izinto kumbutho. Ncamathisela uluhlu kwirisithi uze ulugcine kunye nezinye iirisithi zakho zerhafu ukuze wena kunye nomcwangcisi-mali wakho ube nalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze ubange lo mnikelo njengokutsalwa kwerhafu ukuba kufanelekile ukwenza njalo.
Disney Theme Park Information Iimveliso Zeenwele Abadanisi Abadumileyo Asperger Syndrome Ukunyusa Imali Iingcinga
Abafazi Ifashoni Iifowuni
ndiyazithanda iingcaphuno zomntakwethu omncinci
zihlala ixesha elingakanani iintsholongwane ezibandayo emaphepheni
ungahlamba iphedi yemouse
kuthathwa ixesha elingakanani emva kokugcwalisa uqhawulo-mtshato